Nọmba dị na Guarani Bolivian site na 1 ruo 100 - UniProyecta
El guarani Ọ bụ otu asụsụ kacha nwee akụkọ ihe mere eme na South America na ọ bụ asụsụ ezinụlọ Tupí-Guaraní nke ihe karịrị nde mmadụ asatọ na-asụ ugbu a. N'isiokwu a anyị ga -ekwu maka ya nọmba na guarani.
Akụkọ banyere asụsụ a bara ụba nke ukwuu na kemgbe 1992 ọ bụ asụsụ gọọmentị nke abụọ na Paraguay, n'agbanyeghị na a na -asụkwa ya na mpaghara ụfọdụ nke Argentina, Uruguay na ọbụna Paraguay.
Ịmụ asụsụ ọhụrụ dị mfe karịa ka ọtụtụ mmadụ na -eche, agbanyeghị, na mbụ ọ nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya ma dịkwa egwu. Ịmụta ọnụọgụ ọnụọgụgụ na ịgụta ọnụ bụ ezigbo nzọụkwụ ịmalite na asụsụ. N'isiokwu a, anyị ga -akụziri gị nọmba guarani bụ isi na ụfọdụ iwu iburu n'uche mgbe a na -arụ ọnụọgụgụ na ịkpọpụta ha.
Otu nkọwa nke ị kwesịrị iburu n'uche bụ na emebere usoro ọnụọgụ Guaraní ọgbara ọhụrụ site na A. Decoud Larrosa, onye gbakwunyere usoro ntụpọ.
1 Nọmba Guarani sitere na 0 ruo 100 - Ndepụta
1.1 Ọnụ Ọgụgụ 10 ruo 19
1.2 Ọtụtụ iri, narị otu narị na puku na nọmba Guarani Bolivian
Nọmba Guarani sitere na 0 ruo 100 - Ndepụta
0 - mba'eve (nke pụtara "ihe efu")
1 - peteĩ
2 - mokoĩ
3 - mbohapy
4 - na -enweghị isi
5 - po (nke pụtakwara "aka", "wụlikwa elu")
6 - iteĩ
7 - pokóĩ
8 - na -akpa ọchị
9 - onye isi
Iji nọmba ndị a dịka ntọala ọ ga -ekwe omume ịmụta ọnụọgụ ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe. Ị ga -ahụ ọnụọgụ buru ibu n'okpuru:
Ọnụ Ọgụgụ 10 ruo 19
11 - pateĩ (pa + peteĩ)
12 - pakóĩ (pa + mokóĩ)
13 - pa'apy (pa + mbohapy)
14 - pa irundy (pa + irundy)
15 - pa po (pa + po)
16 - pa potĩ
17 - pa pokóĩ
18 - dị elu
19 - paundy
Dịka ị pụrụ ịhụ, a na -eji ya pa mgbe ahụ emechara ọnụ ọgụgụ. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe gbasara 16, jiri pa (10) na iteĩ (6). 11-13 dịtụ iche, ebe ọ bụ naanị mkpụrụedemede atọ ikpeazụ nke ọnụọgụ ka ejiri.
Ọtụtụ iri, narị otu narị na puku na nọmba Guarani Bolivian
20 - mokóĩ pa
30 - mbohapy pa
100 - afọ
1000 - nke gị
1000000 - hụ
N'ihe gbasara iri, ọ ga -adị ka ịsị "abụọ, iri" ịsị 20, "atọ, iri" ịsị 30, na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ n'ezie ihe dị mfe, ị naghị eche? Ị gaghị enwe nsogbu ịmụ nọmba na Guarani. Na mgbakwunye, maka ndị nke ka na -enwe obi abụọ, anyị akwadebela vidiyo a maka gị ebe ị nwere ike gee ntị wee mụta nke ọma etu ọnụọgụ dị na Guaraní:
Banyere ịkpọpụta okwu, ị nwere ike iji onye ntụgharị okwu ma ọ bụ ọbụna ngwa mee ụzọ ziri ezi nke ịkpọpụta okwu.
Ma nke a abụla ya, anyị nwere olile anya na ị masịrị akụkọ nke taa wee cheta na ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike hapụ anyị okwu n'okpuru. Anyị chọkwara ka ị bụrụ akụkụ nke obodo, yabụ na anyị na -anabata aro na echiche maka isiokwu ọhụrụ ka ọ kuziere gị.
Nọmba Aymara sitere na 1 ruo 100
Inicio » omenala » Nọmba Guarani sitere na 1 ruo 100
2 kwuru na "Nọmba Guaraní site na 1 ruo 100"
August 22, 2018 na 10:15 am
Ọ dị mma, daalụ nke ukwuu maka ichetara m ide ihe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 m bi na Argentina agafere m na mpaghara na ebe a enweghị m enyi m ga -agwa okwu mana ọ bụrụ na ha chọrọ ige m ntị ka m na -ekwu, ana m ege egwu na Guarani yabụ ka m ghara ịlafu asụsụ ahụ, daalụ maka enyemaka gị, ekele m.
Julaị 24, 2019 na 1:29 am
Kedu ihe 1009 ga -adị?